Khankanya incwadi yethu yeendwendwe kwaye ufumane umvuzo we-5% wesaphulelo oza kusetyenziswa kwivenkile yethu!
Nceda uphawule incwadi yethu yeNdwendwe.
Wow wow wow yintoni inkonzo enkulu, bendonwabile ndonwabile yile nkonzo. I-100% inokuthenjwa kwaye ukusuka ekuqaleni ukuya ekugqibeleni uyazi apho ikhoyo ipasela yakho. Le nkampani ibonakala ngathi yenziwe apho ekhaya xa kufikwa kwinkonzo yabathengi. Khange ndibenangxaki nenkonzo yale nkampani. Kwaye kukho iimveliso ezilungileyo kwaye zonke zinikezelwe kakuhle. Yonke indawo yale oda ifanelwe yimali nganye. Le yeyona nkampani ihamba phambili. Ndimele nditsho ukuba lo ngumyalelo wam wokuqala kodwa ndiza kuphinda ndibusebenzise. Qhubeleka nomsebenzi omhle. Owu btw ipeni kunye nekhadi kuxatyisiwe. Olunye uthinte kancinci kancinci luhamba indlela ende. Le nkampani iyayazi indlela yokukugcina wonwabile. Enkosi guys ~ Ububi
Shiya uluvo malunga namava akho okuthenga kwivenkile yewebhu ye-GBL yaseYurophu. Siyayibulela yonke ingxelo kwaye siya kukuvuza ngamagqabaza akho ngekhowudi ye-5% yokuthumela isaphulelo kwidilesi ye-imeyile.
Amagqabantshintshi avunywa yonke imihla ngabongameli bethu. Nceda ube nomonde ukuba uluvo lwakho alubonakali ngqo kwiphepha lewebhu. Ukuba unomcimbi ongxamisekileyo kakhulu nceda usebenzise incoko yethu ephilayo, i-imeyile okanye usitsalele umnxeba. Sifumaneka kwinombolo yethu ethi: +31 (0) 85 888 3500 yefowuni yonke imihla ukususela nge-9 kude kube nge-17: 00 yeXesha laseMpuma. Ngeempelaveki (ngoMgqibelo nangeCawa) iofisi yethu ayivulekanga. Ewe ukuba kunokwenzeka injongo yethu kukuphendula zonke i-imeyile kunye nokuhlala uncokole ngokuhlala ngokukhawuleza.
Bhala ungeniso olutsha lweNdwendwe
Fihla le fomu.
Sukuchukumisa oku: Sukuchukumisa oku:
Ukungeniswa kweendwendwe: *
Umbuzo: 10 + isithandathu =
Amabala aphawulwe nge * ayadingeka.
Idilesi ye-imeyile ayinakupapashwa.
Ngezizathu zokhuseleko sigcina idilesi ye-IP 51.77.240.244.
Kunokwenzeka ukuba ukungena kwakho kubonakale kuphela kwincwadi yeendwendwe emva kokuba sikuhlolile.
Sinelungelo lokuhlela, ukucima, okanye ukungashicileli okubhaliweyo.
Uluhlu lweencwadi zeendwendwe12345...25→
Vmgc ubhale kwi16 / 02 / 2020 kwi14: 57:
Vato ubhale kwi15 / 02 / 2020 kwi12: 42:
Abed ubhale kwi11 / 02 / 2020 kwi12: 04:
Nick ubhale kwi10 / 02 / 2020 kwi09: 19:
Molo .. unekhowudi yesaphulelo?
Kuczmierowski Marcin ubhale kwi09 / 02 / 2020 kwi20: 17:
Wenze kakuhle! Inkonzo entle. Ukuphendula ngokukhawuleza nenkcubeko. Enkosi.
UMarcin Kuczmierowski ubhale kwi09 / 02 / 2020 kwi20: 01:
Inkonzo ekhawulezayo nehle kakhulu. Enkosi.
UMarcin Kuczmierowski ubhale kwi09 / 02 / 2020 kwi16: 05:
Amad ubhale kwi03 / 02 / 2020 kwi22: 17:
UFrancois ubhale kwi01 / 02 / 2020 kwi22: 12:
Carlos Carlos ubhale kwi31 / 01 / 2020 kwi17: 53:
Andrew ubhale kwi15 / 01 / 2020 kwi12: 27:
Unxibelelwano lwabathengi olulungileyo, iimpendulo ezikhawulezayo kwaye ziluncedo kwimbuyiselo xa ihlawulwe kabini ngempazamo. Ukuhanjiswa ngokukhawuleza.
umthengi ubhale kwi11 / 01 / 2020 kwi13: 37:
Inkxaso enkulu ngokukhawuleza ukuhanjiswa.
E. Gomez ubhale kwi10 / 01 / 2020 kwi12: 38:
Imveliso egqwesileyo kunye nokuhanjiswa ngokukhawuleza okukhulu. Impendulo ekhawulezileyo kwi-imeyile. Ndiyincoma ngokupheleleyo.
Adriano Sousa ubhale kwi09 / 01 / 2020 kwi23: 55:
I-Muy yahluzo kwisiphumo esisekupheleni kwemveliso yeemveliso ezinobunzima ezongezelelweyo. Iyakwazi ukuphinda yenziwe. Ukungathandeki
IMTZ TRADING LTD ubhale kwi18 / 12 / 2019 kwi05: 26:
UMSEBENZI OWONGEZIWEYO NGEENDLELA EZIQHELEKILEYO
marques ubhale kwi16 / 12 / 2019 kwi21: 23:
Altid hurtig og inkonzo uthixo
Mike Evans ubhale kwi05 / 12 / 2019 kwi01: 37:
I-Gel isebenza kakuhle!
Dan ubhale kwi04 / 12 / 2019 kwi23: 41:
Wha shami ubhale kwi04 / 12 / 2019 kwi18: 38: